Ubuchwepheshe Bokushisa Okusha Kwama-Next Pod
Igcwele isixazululo se-pod esithuthukisiwe, ukukhiqizwa komphunga kukhula ngokuhlukile. Izigidi zama-pores osayizi abancane kukhoyili ye-ceramic zikhiqiza umhwamuko obushelelezi nobumsulwa, oletha ukunambitheka okuhle kanye nesipiliyoni se-vaping esivelele.
Ubuchwepheshe beDynamic Balance Leakproof Technology
Yakhiwe ngochungechunge lwezixazululo zokuvuza, iDynamic Balance Leak-proof Technology iyakwazi ukwehlisa izinga lokuvuza lifike kuma-98%, uma kuqhathaniswa nama-pods ajwayelekile.
Ikhoyili emise okweB Bowl, i-Anti-Condensation Structure, i-U-shaped Air Passage, amaNdawo Amathathu Womoya kanye Nokwakhiwa kweMaze kuyingxenye yezixazululo. IDynamic Balance Leak-proof Technology isebenzisa izixazululo ezahlukahlukene ngokusho kwama-pods ahlukene, kuhlose ukwehlisa izinga lokuvuza kukhule kakhulu.
Iconsi ngalinye le-E-liquid liphefumulelwa izinhlayiya ze-aerosol ezincane kune-1μm, kuthuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kokulethwa kwe-nicotine.
Izinhlayiya ze-Aerosol zincane kune-1μm, umhwamuko obushelelezi futhi obushelelezi uletha ukunambitheka okumsulwa futhi okukhulu
Izinhlayiya ze-aerosol ezinkulu, umusi omkhulu kodwa ongalingani uholela ekunambithekeni okunamathelayo
Okuhlangenwe nakho okuqhubekayo kwe-premium vaping kuze kube sekudonseni kokugcina
Ukungaguquguquki okubuthakathaka, isipiliyoni esikhulayo siphela kancane kancane
Ukwaneliseka okukhulu, ukusebenza kahle kokulethwa kwe-nicotine kukhuphuka ngama-87.58%
Ukulethwa kahle kwe-nicotine kuholela ekwanelisekeni okuphansi
Ukufana okushisa kangcono kakhulu, akukho ukunambitheka okushisiwe
Ukushisa okungalingani kubangela ukushisa okungapheli
Ikhoyili ye-ceramic emise okwe-Bowl kanye nomoya ongcono kakhulu kunciphisa kakhulu izinga lokuvuza
Isakhiwo esixegayo asikwazi ukukhiya i-E-liquid ngokuqinile, izinga lokuvuza eliphakeme
Akukho ukwehlukana, ukuthula okukhulu
Inhlansi ekhazimulayo nemifantu, ingozi enkulu
Ukukhiqizwa okuzenzakalelayo kanye nenqubo yokuhlola yomhlaba wonke iqinisekisa ikhwalithi ephezulu
Ukukhiqizwa kwesandla kwendabuko kuholela kwikhwalithi engazinzile
“Ikhwalithi enhle yokwakha, ukulingiswa okunembile kogwayi kuze kube manje nokudweba okushelelayo. I-FEELM ngokusobala inesiteji esiqinile lapha futhi ngibheke phambili ekusetshenzisweni kobuchwepheshe ngokuzayo. ”
“Ikhoyili ye-FEELM isebenza kahle. Ukunambitheka kuhlanzekile impela, kufudumele kamnandi, futhi ukushaya komphimbo kuqinile. Kwakungekho ukuvuza, ukukhafula, noma ukuqhuma noma yini! Futhi i-vape enhle kakhulu. ”
“I-FEELM Pod inikela ngokuqedwa okuhle, ikhwalithi emangalisayo, i-vape emnandi ephumelelayo ngefomethi ehlangene. Akungabazeki ukuthi kuyisinqumo esihle kakhulu sokuqala ugwayi kagesi. ”
"Lezo zikhoyili ezinqenqemeni ngokusobala ziyimbangela yokushayela i-vape emnandi nene-flavourome, i-vape ngenkathi esepholile efudumele, isabushelelezi kakhulu futhi iyajabulisa kakhulu."
AMAKHOSI AMAKHOSI: I-atomizer entsha ye-FEELM evela kwa-SMOORE isebenzisa ubuchwepheshe obuphambili bokushisa ifilimu ukwenza ngcono isipiliyoni se-pod-style vaping.
Ugwayi we-E Liquid Vapor, Ugwayi waseNewport E, I-Epen, Ugwayi Wokushisa, Ukubhema Okuhlukile, I-E Cigarette Blister Pack,